Ra’isul Wasaare Khayre oo Boqolaal dhalin yara ah la daaway Ciyaar ka dhacaysay Goraan ku yaala Degmada Hodan – Daily Som
Ra’isul Wasaare Khayre oo Boqolaal dhalin yara ah la daaway Ciyaar ka dhacaysay Goraan ku yaala Degmada Hodan
Ra’isul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali khayre ayaa shalay ka qayb galay Kulan ciyaareed aad uxiisa badnaa oo ka dhacay Goraan ku yaala Xarunta Degmada Hodan oo ay ku ciyaarayeen laba dugi oo ka wada dhisan degmadaas.
Tartaan oo ay soo qaban qaabiyay Maamulka Gobalka Banaadir ayaa waxaa horaan daah furay Gudoomiyaha Glaka Banaadir, wuxuuna udhaxeeyay Iskuulada ku yaala Degmada.
Ra’isul wasaare khayre ayaa waxaa ku whliyay Daawashada Ciyaarta Masuuliyiin ka tirsan Xukuumadiisa iyo maamulka Gobalka Banaadir, waxaana ugu muhiim sanaa , wasiirka Amniga, Ciyaaraha iyo ku xigeenada Gudoomiyaha Gobalka ee amniga iyo arimaha bulshada.
tartabnka ayaa shalay waa iska hor yimid Dugsiga dhagoola yaasha iyo dugisi kale oo lagu magaaaco al madar oo labadaba ka dhisan degmada, waxa ayna guusha 3-0 ku raacday guusha Dugiga dhagoola yaasha.
Ra’isul Wasaare Khayre oo Boqolaal dhalin yara ah la daaway Ciyaar ka dhacaysay Goraan ku yaala Degmada Hodan added by Staff on March 20, 2018